Madaxweynaha J. F. S,mudane xasan sheekh maxmud Oo Saakay Dalka Dib Ugu Soo Laabtay ”Sawirro
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya ayaa safarro shaqo ku soo kala bixiyay wadamada Biljim, Talyaani iyo Mareykanka.
Madaxweynaha ayaa magaalada Brussles uga qeybgalay shirkii New Deil ee dalkeena dhaqaalaha loogu yaboohay, sidoo kale madaxweynaha ayaa booqday dalka Talyaaniga wuxuuna halkaasi kulamo kula soo qaatay mas’uuliyiinta dalkaasi.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkiisii ugu dambeeyay ku soo maray dalka Mareykanka, isagoo halkaasi kulamo kala duwan kula soo qaatay Jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolada Washinton iyo Ohio, wuxuuna Newyork uga qeybgalay shirlka Qaramada Midoobay oo uu ka jeediyay khudbad taariikhi ah.
Madaxweynaha ayaa intii uu joogay Mareykanka waxaa uu kulamo gooni gooni ah la qaatay siyaasiyiin ka tirsan Mareykanka oo uu ka mid ahaa xoghayaha arrimaha dibada Mareykanka, sidoo kale wuxuu halkaasi kula kulmay xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay iyo siyaasiyiin kale oo ka tirsan wadamada caalamka.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo gudaha garoonka diyaaradah ku qabtay shir jaraa’id ayaa ka warbixiyay safarkiisii isagoo tilmaamay inuu ahaa mid guuleed
Ciidamada Dowlada oo xiray Masuuliyiin katirsan Dowlada kadib markii Hoobiyaal iyo Bambaanooyin laga soo helay guryahooda.
Ciidamada Nabad Sugida Dowlada Soomaaliya ayaa xalay xiray Masuuliyiin katirsan Mamaulka Degmada Shibis kadib markii guri ay kusugnaayeen laga soo helay hub aad u fara badan ay ku jiraan Hoobiyaal iyo Bambaanooyin.
Ciidamada ayaana dhamaan xiray Masuuliyiintan iyo xubno kale oo guriga kusugnaa waxaana lasoo sheegayaa in baaritaano dheeraad ah lagu wado dadkan la tuhmayo in Hubkaan ugu tala galeen qal qal galinta amaanka Magaalada Muqdisho.
Dadka la xiray ayaa sidoo kale waxaa ku jira Haweeney la sheegay in ay katimid Magaalada Kismaayo uuna qabo sargaal sare oo katirsa Al-Shabaab taa oo xiliga howlgalka la sameenayya kusugneed guriga Ciidamadu galeen.
Lama oga xariirka ka daxeeya Masuuliyiinta Maamulka Degmada Shibis katirsan iyo Xarakada Al-Shabaab waxaana dadkaasi la xiray iyo hubkii guryaha laga soo saaray dhaaan lagu hayaa saldhig ay leeyihiin Ciidamada Nabad Sugida oo kutaal Magaalada Muqdisho.
Wadooyinka Magaalada Muqdisho oo saakay xiran iyo Xaalada Magaalada oo saakay jawi nuuc cusub ah laga dareemayo.
Waxaa saakay inta badan xiran wadooyinka Magaalada Muqdisho halkaas oo lagu arkayo ciidamo tiro badan oo katirsan Dowlada Soomaaliya, iyadoona gabi ahaan gaadiidka loo diiday isticmaalka wadooyinka xiran.
Wadada Warshadaha , Sodonka iyo Maka Al-Mukarama ayaa kamid ah wadooyinka saakay xiran laguna arkayo ciidamo tiro badan oo gaadiidka u diidaya isticmaalka wadooyinkaasi kuna amraya in ay maraan wadooyinka qardo jeexa.
Waxaa sidoo kale jira wadooyin cusub oo dhagxaan waa weyn lagu xiray waxaana la ogeyn ilaa hada sababta loo xiray wadooyinka Muqdisho , shacabka ayaana saakay ah kuwa cagtooda maalaya.
Xaalada ayaa saakay u muuqata mid ka duwan sidii hore shacabka ayaana aad uga cabanaya xiritaanka Jidadka Magaalada Muqdisho , wadooyinka qarda jeexa ah ayaa sidoo kale ah kuwa culees badan uu ka jiro.
Xiritaanka wadooyinka Magaalada Muqdisho ayaa imaanaya xili ay soo baxayeen digniino ku aadan in Dagaalyahnadaa Al-Shabaab maleegayaan in Muqdisho ka geestaan weeraro lamid ah kuwii ka dhacay Magaalada Nairobi.
Gudoomiye Tarsan oo maanta Su'aalo lagu hor weediiyay Golaha Wasiirada Xukuumada Somalia.
Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan gaar ah, waxaana shir guddoominayay kusimaha Ra’iisul Wasaaraha ahna Wasiirka Kheyraadka Mudane Cabdirisaaq Cumar Maxamed, waxaana kulankan lagu casuumay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho kaasoo sharaxaad ka bixinayay xaaladda amniga gobolka, qorshaha deriseynta, kaalinta gobolka ee amniga caasimadda iyo weliba mashaariicda horumarineed ee gobolku ku howlan yahay.
Sidoo kale, Golaha Wasiirada ayaa ka hadlay xaaladda nololeed ee qoysaskii ku barakacay fataahadii dhowaan uu sameeyey wabiga Shabelle nawaaxiga magaalada Jowhar, kaasoo baabi’iyay dhul beereed baaxad leh, isla markaana jaray isu socodkii wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo gobolka Sh/dhexe. Waxayna goluhu ugu yabooheen gargaar dhaqaale.
Golaha Wasiirada ayaa taageeray qorsheyaasha gobolka ee horumarinta iyo sugida amniga gobolka, waxaana lagu ammaanay kaalinta bilic soo celinta iyo iftiiminta magaalada.
Waxayna ugu baaqeen golaha Wasiiradu inay sii dardargeliyaan wada shaqeynta maamulka gobolka Banaadir uu la leeyahay hay’addaha amniga, si loo wiiqo qatarta argagixisada.
Golaha Wasiiradu waxay kulankooda diirada ku saareen xaaladda fatahaada wabiga shabelle ee gobolka Sh/dhexe, waxayna ugu deeqeen lacag dhan Konton kun oo Dollarka mareykanka ah ($50.000), waxayna dhanka kale baaq u jeediyeen hay’addaha gargaar iyaga oo ugu baaqay inay la gaaraab shacabkaasi tabaaleysan caawimaad dhan kastaba leh.
Daawo Sawirada Silica iyo Saxariirta uu kunool yahay Wariye Mareykan ah oo lagu heesto gudaha Soomaaliya.
Kooco Burcad badeed Soomaali ah ayaa soo bandhigay Muuqaalka Wariye Asalkiisu mareykan yahay balse heesta Dhalashada Dalka Jarmalka kaa ay ka afduubtay Koonfurta Magaalada Gaalkacyo taariikhdu marka ay aheed 21-bishii Janaayo 2012.
Wariyahan oo lagu magacaabo Micheal Scott Moore ayaa xiligan kusugan xaalad halis ah waxaana lasoo bandhigay Sawiro laga soo qaaday isaga oo dhinacyada ay ka taagan yihiin dabley hubeesan qoryahana ku taagaya Wariyahan la heesto.
Micheal Scott Moore oo la hadlay wariyaal ku booqday halka lagu heesto ayaa sheegay in xaaladiisa ay halis ku jirto waxa uuna codsi u diray Qaramada Midoobay iyo bulshada Caalamka kuwaa oo ka codsaday ka qeyb qaadashada sii deyntiisa.
“Anigoo ah Micheal Scott waxaan QM iyo Beesha caalamkaba ka codsanayaa inay soo caawiyaan oo iga bad baadiyaan kooxaha afduubka ii heysta , xaqiiqdii waxaan ku noolahay nolol halis badan waan cabsanayaa xili walbo in la dilo ayaana halis ugu jiraa '' ayuu yiri Wariyahan oo dareen naxtin leh wajigiisa laga dheehanayay.
Kooxaha Burcad Badeeda Soomaalida ee wariyahan Afduubka u heesta ayaa marar kala duwan dalbaday in la siiyo lacago madax furasho ah ay kusiidaayaan Wariyahan hadii kale ay dili doonaan , mana jiro ilaa hada jawaab cad oo ka timid Dowlada Mareykanka uu ninkaan asal ahaan kasoo jeedo.
Hiba Nuura oo xalay wacdaro ka dhigtay Xaflad lagu soo dhaweenayay oo Muqdisho lagu qabtay(Daawo Sawirada)
Duqa Magaalada Muqdisho ,wasiiro .Xildhibaano Muqdisho,,Abwaaniin,fanaaniin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qeybgalay munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayey fanaanada Hibo Maxamed Cudoon (Hibo Nuura) taasi oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Munaasabadda oo lagu qabtay Hotelka City Palace degmada C/casiis ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir ayadoo Munaasabaddana ay fanaanada Hibo Nuura kusoo bandhigtay suugaan wadani ah oo isugu jiray heeso ay horey ugu luqeysay iyo kuwo cusub oo ay hada ugu talagashay iney ku muujiso isbedellada nabadda iyo hormarka ah ee ka jira Caasimadda, sidoo kalena waxaa munaasabadda suugaan kusoo bandhigay abwaaniin iyo fanaaniin ka tirsan hobollada Qaranka ee Waaberi.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Warfaafinta,Boostada,isgaarsiinta iyo Gaadiidka Xukuumadda Soomaaliya Mudane C/shakuur Cali Mire oo munaasabadda khudbad ka jeediyey ayaa tilmaamay in magaalada Muqdisho oo lagu qabto munaasabad ceynkan ah xili habeen saq dhexe ah ay ka turjumeyso nabadda ka jirta Caasimadda dalka ee Muqdisho waxaana uu intaa ku daray in nabaddan aysan si fudud ku imaan oo dhiig loo huray balse dadka reer Muqdisho laga doonayo iney ilaaliyaan xornimadaas.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo isagana dhankiisa khudbad ka jeediyey Munaasabadda ayaa ugu horeyn tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir uu diyaar u yahay inuu ku dhiirageliyo fanaaniinta dalkooda hooyo dib ugu soo laabaneysa si ay umadda uu wacyi geliyaan waxaana uu madasha ka sheegay fanaaniin dhowaan magaalada Muqdisho kusoo wajahan oo uu ka midyahay boqorka Codka Maxamed Suleymaan Tubeec iyo sidoo kale fanaanka Qoomaal oo isaguna maalinta berrito ah Muqdisho kusoo wajahan.
Munaasabadda ayaa kusoo gebageboowday jawi aad u wanaagsan balse horey ayaa magaalada Muqdisho waxaa Munaasabad soo dhaweyn ah ugu sameeyey fanaanada Hibo Nuura Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka.
Maxaa kasoo baxay kulamo kala duwan oo R/Wasaare Saacid la Yeeshay Madaxda Dalka Turkiga.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax shirdoon”Saacid” iyo Ra’iisul Wasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xalay oo Khamiis ahayd, 26 September 2013, waxaa ay kulan ku wada qaateen magaalada Ankara ee dalka Turkiga iyadoo ay wehelinayeen xubno muhiim ah oo ka kala socday Xukuumadaha labada dal ee walaalaha ah, Waxaa sidoo kale kulanka ka qaybgalay Ra’iisul Wasaare kuxigeenka dalka Turkiga Mudane Bekir Bozbag.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa uga mahadnaqay dalka aan walaalaha nahay ee Turkiga sida ay u garab istaageen shacabka Soomaaliyeed xilli aad loogu baahnaa kaalmada caalamka. Waxaa Ra’iisul Saacid uu sheegay in gurmadkii ay Turkigu u fidiyeen Soomaaliya ay sabab u noqotay in uu sii xoogaysto xiriirka u dhexeeya labada dal.
“Xiriirka aan la wadaagno Turkiga waa mid ahmiyad gaar ah u leh Soomaaliya sidii ay dib ugusoo kaban lahayd oo ay xasilooni u heli lahayd , sidoo kale waxaa ay muhiim u tahay in labada dal ay iska kaashadaan siyaasadda iyo dhaqaalaha” Ayuu yiri Ra’iisul wasaare Saacid.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya waxaa uu caddeeyay in dawladdiisu ay ku talaabsatay horumar balaaran tan iyo markii uu Ra’iisul Wasaaraha Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan uu soo booqday Soomaaliya bishii Auguts 2011. Waxaa Ra’isul Wasaaruhu dhanka kale sheegay in wali ay jiraan caqabado aad u fara badan, waxaa caqabadahaasi kamid ah hanjabaadaha , isagoo tusaale usoo qaatay weerarakii fulaynimo ee kooxda argagixisada Al-Shabaab ay ku qaadeen Safaaradda Turkiga 27-dii July 2013 iyo kii ugu danbeeyay ee Argagixisadu ay ku qaadeen dhismaha Westgate Mall ee Nairobi.
Waxaa Ra’iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” iyo Ra’iisul Wasaare Recep Tayyip Erdogan ay uga tacsiyeeyeen dawladda iyo shacabka Kenya weerarkaasi argagixisada ahaa ee lagu qaaday Westgate Mall. Dhanka kale Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon”Saacid” waxaa uu sheegay in weerarkii lagu qaaday safaaradda Turkigu aysan ahayn oo kaliya weerar lagu qaaday shaqaalaha rayidka ah ee Turkiga balse uu weerarkaasi la mid ahaa in la weeraray shacabka Soomaaliyeed iyadoo danta laga leeyahay ay tahay curyaaminta mashaariicda horumarineed ee dawladda iyo shacabka Turkigu ay u fidiyeen shacabka Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaare Saacid waxaa uu hoosta ka xariiqay in taageerada ay dawladda Turkigu ka wado Soomaaliya ay tahay mid aan lasoo koobi Karin isagoo ka dhawaajiyay in Turkigu ay maalgaliyaan waxbarashada sida in ay ugu deeqeen boqolaal arday ah waxbarasho lacag la’aan ah, maalgalinta ay ku sameeyeen caafimaadka sida dayac tirka cisbitaalka Digfeer iyo goobo kale oo caafimaad, maalgalinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada sida wadooyinka iyo biyaha, waxaana dhamaan mashaariicdan ay tusaale u yihiin sida dawladda Turkigu u garab taagantahay shacabka soomaaliyeed.
“Mashaariicda horumarineed ee Soomaaliya aan ka fulinayno waxaa ay kaalin mug leh ka qaateen dib-u-soo celinta rajjada Soomaaliyeed,hormarinta amaanka,abuurista shaqooyinka iyo sidii Soomaaliya ay u heli lahayd dariiqa saxda ah ee dib-u-kabashada iyo dib-u-dhiska dalka” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Recep Tayyip Erdogan.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” waxaa uu uga mahadceliyay dawladda iyo shacabka Turkiga sida ay u gacan qabteen Soomaaliya isla markaana waxaa uu soo dhoweeyay gargaarka aan joogsiga lahayn ee Turkigu ay ka wadaan Soomaaliya sida dhismaha hay’adaha dawladda, cadaaladda, waxbarashada, caafimaadka iyo dib usoo noolaynta adeegyadii bulshada, waxaana uu sheegay in uu rajaynayo in markale uu dalka soo booqdo Recep Tayyip Erdogan.
Ra’iisul Wasaaraha Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan waxaa uu soo dhoweeyay xiriirka dhow ee labada dal ,heshiisyada labada dawladood ay wada gaareen iyo iskaashiga ay wadaagayaan Turkiga iyo Soomaaliya.
Milyaneer Aas la yaab ah u sameeyay Gaari uu lahaa si uu Aakhiro ugu isticmaalo Gaarigaasi. (Daawo Sawiradda)
Warbaahin Wararka faafisa oo la yiraa Odity Central ayaa soo bandhigtay Sawirro uu Nin ganacsade ahi ku xabaalayo Baabuur qaaliya oo uu leeyahay si uu maarka uu dhinto aakhiro ugu isticmaalo.
Ganacsadahan soo dhigay Bogagga Xiriirka Bulshada, kuwaas oo ay ka muuqato isagoo Gaarigiisa oo ku fadhiya 500 Kun oo Dollar ku aasaya God uu qoday, wuxuuna markaas ku fikirayay in Nolosha Raaxada ah ee uu iminka heysto aanay dhamaan doonin marka uu dhinto ka dib.
Sawiradan ayaa Caro ku abuuray Dad badan oo Ninkan u arkay mid is muujis badan, iyagoo ku dooday in halka uu Lacagta Shanta Boqol ee Kun oo Dollar gaaraysa Dhulka ku qasaarin lahaa, inuu Dadka dhibaateysan ku caawiyo.
Waxa ay noqotay Dhacdo cajiib ah oo inta badan Bulshadda Caalamka dhagafaar ku riday, waxaana arrintaasi qalinka kadaba qaatay Warbaahinta Caalamka oo iyana la cajiibtay Dhacdadaasi.
Ganacsadahaani, ayaa waxaa la rumeysan yahay inuu yahay mid aad u raaxa jecel oo aan laheyn wax Diin ama dabci ah, balse uu yahay Ruux xooga saara sidii uu kusoo muuqan lahaa.
Ugu dambeyntii, Ganacsadahaani ayaa waxa uu iminka halkaasi kusoo afjaray sticmaalka gaarigiisa waxa uuna iibsaday gaari kaasi lamid ah.
Dilal kala duwan oo xalay ka dhacay Kismaayo iyo cabsi badan oo soo wajahday shacabka kunool Magaaladaasi.
Wararka aan saakay ka heleyno Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in xalay magaaladaasi ay ka dhaceen dilal kala duwan oo loo geestay dad shacab ah iyo askar katirsan Ciidanka Maamulka Jubba.
Dilalkan waxaa fuliyay sida dad goob joogayaal ah ku warameen rag bistoolado ku hubeesan kuwaa oo siyaabo kala duwan xaafado katirsan Magaalada Kismaayo ugu dilay labo ruux oo rayid ah iyo askari katirsan Maamulka Jubba.
Meydka askariga ladiay ayaa saakay lagu arkay xaafada Calanley , iyadoona labada ruux ee shacabka ah ee la dilay iyana aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee loo beegsaday kana dambeesay dilkooda.
Magaalada Kismaayo maalmihii lasoo dhaafay waxaa kusoo kordhayay falalka dilka ah ee ku saleesan aanooyinka qabiil iyadoona cabsi badan ay lasoo daristay shacabka ku dhaqan kuwaa oo ka cabsi qaba dilalka kusoo kordhay magaalada
isbuuc gudihiis Mahaalada Kimaayo waxaa lagu dilay ku dhawaad 10-qof oo u badnaa rayid kuwaa oo dhamaan siyaabo kala duwan loogu dilay xaafadao katirsan Kismaayo.
Daawo Sawirada Madxaweyne Xasan Sheekh oo kulamo Xasaasi ah la qaatay madax kala duwan oo Caalamka katirsan.
Madaxweynaha J,F Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa a kulamo gaar ah la yeeshay qaar ka mid ah madaxda caalamka oo uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Turkiga Mudane Cabdulah Guul, Amiirka Qatar H.H. Sheikh Tamiim Bin Xamad Al Thaani iyo Xoghayihii hore ee Wasaarada Arrimaha Dibadda ee Maraykanka Hillary Clinton, waxayna ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen guud ahaan ammaanka Soomaaliya iyo Caalamka.
Madaxweynaha ayaa wuxuu yiri “Aqoonsiga dowladda Soomaaliya la aqoonsaday maanta waxaanu ku helnay taakulayn Bankiga Aduunka, Hay’adda Lacagta Aduunka (IMF), Bankiga Horumarinta Afrika. Waxaanu Saxiixnay ayuu yiri madaxweynuhu Heshiiskii Cotonou. Soomaaliyana horay ayey u socotaa gadaalna eegi mayno”Ugu danbeyn maalinta berri ah ayuu Madaxweynaha.
Dowladda South Africa iyo Ganacsatada waaweyn ee dalkaasi oo Saakay wadnaha farta ku haya cabsina soo wajahday .
Sida laga soo xigtay Wargeyska PD live oo kasoo baxa dalka South Africa, ayaa sheegay inay jiraan Cabsiyo xoogan oo iminka soo foodsaaray Xarumaha Ganacsi kuwooda ugu waaweyn Dalka South Africa.
Ganacsatada Xarumaha ganacsi ee South Africa ayaa waxa ay walaac xoogan ka muujinayaan qaabka ay Ashabaab ula dhaqmeen Xarunta ganacsi Westgate, iyagoona iminka ka cabsi qaba in Werarkaasi loosoo wareejiyo Xarumaha Ganacsiga South Africa, sida uu daabacay Wargeyska PD Live ee dalkaasi kasoo baxa.
Sidoo kale,waxa uu Wargeyska daabacay inay jiraan kalsooni ay qabaan Ganacsatada South Africa maadaama aysan Dowladda Faragalin Arrimaha Somalia gaar ahaan Alshabaab,haddana waxaa jira Cabsiyo gaar ah oo soo wajahay Ganacsatada, iyadoona ay jiraan Ciiddamo gaar oo iminka la dhigay xarumaha ganacsi ee ugu waaweyn South Africa, si looga bad-baado Weeraro lamid ah kan Westgate oo ka dhaca.
Ugu dambeyntii, Cabsi xoogan ayaa waxaa laga dareemayaa magaalooyinka dalka Koonfur africa oo waxa la sheegay in Sirdoonka dalkaasi la geliyey heegan si looga feejignaado weerar la mid ah kan Westgate inuu ka dhaco Xarumaha ganacsi ee kuyaalla South Africa.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wada dadaalo aad u xoogan (Daawo Sawirada)
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo safar shaqo ah ku joogo dalka Maraykankakulan khaas ah la yeeshay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Boqortooyada Sucuudiga H.H. Saud Bin Faisal. Kulankan ayaa Madaxweynaha iyo Wasiirku ay uga wada hadleen Arrimaha Nabadgelyada, Dhaqaalaha, iskaashiga xiriirka labada wadan ee soo jireenka ah.
Madaxweyne Xasan Shiikh oo u jooga magaalada New York Shir Sanadlaha Qaramada Midoobay oo maanta furmay ayaa kulankan khaaska ah kala hadlay H.H. Saud Bin Faisal soo celinta Safaaradda Sucuudiga ee Soomaaliya wuxuuna u sheegay in ku dhowaan 30 Safaaradood ay Soomaaliya ka shaqeeyaan, Dowladda Soomaaliyana ay diyaar u tahay sidii ay u meel marin lahayd dib u soo celinta Safaaradda Sucuudiga ee Soomaaliya.
Madaxweynaha Xasan Shiikh ayaa kulan kale la qaatay Kaaliyaha Wasiirka Arrimaha dibadda u qaabilsan Arrimaha Afrika Marwo Linda Thomas Greenfield, wuxuuna warbixin kooban ka siiyey xaaladda Soomaaliya guud ahaan iyo dhanka amniga.
Marwo Linda Thomas ayaa sheegtay in dowladda Maraykanka ay ka go’an tahay sidii Soomaaliya ay horay ugu socon lahayd, Dowladda Maraykankuna garab taagan tahay Soomaaliya mar walba ayey tiri Linda Thomas.
Madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo Shir Sanadlaha Qaramada Midoobay maalinta Khamiista,wuxuuna kulamo gaar ah la yeelan doonaa madax kala duwan maalmaha inaku soo aadan wuxuuna kala hadli doonaa qaabkii lagu taageri lahay dib u habeynta heyadaha amniga iyo soo celinta nabadda.
Daawo Sawir laga soo qaaday qaar kamid ah Kooxaha Hubeesan ee wali xooga ku heesta Xarunta Westgate Mall.
Waxaa aad u yar xogta laga heli karo Kooxaha Hubeesan ee wali gudaha ugu jira Xarunta Westgate Mall tiradooda iyo halka ay ka kala yimaadeen iyo dhalashadoodaba iyadoona ay jiraan warar kala duwan oo kooxahaasi laga tabiyay.
Waxaa Markii ugu horeesay Warbaahinta heshay sawir laga soo qaaday labo kamid ah raga Hubeesan ee gudaha ugu jira Xarunta Westgate Mall maalintii afaraad kuwaa oo wata qoryaha AK-47 booshah madaxana ugu xiran yahay calaamado madow.
Kooxaha gudaha ugu jira Xarunta Westgate Mall ayaa la rumeesan yahay kaliya in aysan Soomaali aheyn balse ay ku jiraan dad ajaaniib ah sida kuwa ka yimid dalal carbeed , Kenya iyo kuwa kale oo wadamada Reer galbeedka kasoo jeeda.
Madaxweyne Xasan Sheekh Oo La Kulmay Madaxda Jaamacadda Ohio Iyo Xildhibannada Gobolka Ohio Ee Mareykanka”Sawirro”
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kulan la yeeshay madaxda Jaamacadda Ohio State University iyo qaar ka mid ah Xildhibaanada gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
Kulankaas kadib ayaa Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu khudbo ka jeediyay Glenn School for Public Affairs oo qeyb ka ah Jaamacadda Ohio, halkaas oo ay goobjoog ka ahaayeen dad dhaafaya 250 qof. Jaamacadda Ohio ayaa ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee dalka Maraykanka si weyna loo qadariyo.
Khudbadan oo socotay ilaa iyo 40 daqiiqo ayaa Madaxweynahu wuxuu sheegay in Waxbarashadu ay tahay lama huraanka nolosha ayna haboon tahay inaan marnaba laga harin.
Madaxweyne Xasan ayaa ka waramay xaaladda nabadgelyo, siyaasad, dhaqaale iyo waxbarasho ee dalka Soomaaliya wuxuuna kula dardaarmay dhallinyarada Soomaaliyeed ee dhigata Jaamacadda Ohio inaysan hilmaamin dalkooda Hooyo ayna muhiim tahay inay kusoo noqdaan markay waxbarashadooda dhamaystaan isbedel fiicanna ka sameeyaan.
Mahadnaq gaar ah kadib wuxuu Madaxweynuhu ku booriyey madaxda Jaamacadda Ohio inay dhanka waxbarashada ka caawiyaan dalka Soomaaliya.
Maleeshiyaadka Al Shabaab oo maalintii 3-aad dhafar ah & dad soo baxsaday oo mucjisooyin cusub soo sheegay.
Waxaa maalintii sadexaad dhafar ah oo aanan weli seexan maleeshiyaadka ururka Al Shabaab ee qabsaday xarunta ganacsiga Westgate Mall ee magaalada Nayroobi. Dadkii ugu dambeeyay ee ka soo baxsaday gacanta kooxahaan hubeeysan ayaa gudaha xaruntaan waxa ay ka soo sheegayaan mucjisooyin badan.
Dadka oo qaarkood ka soo baxay daaqadaha dambe ee daarta Westgate Mall ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyaadka Al Shabaab habeenkii xalay ahaa mar la damcay in la miro ama daalka lagu gaado balse weli ay yihiin rag laga yaaban yahay oo keeb la yuurar ah.
Ciidamada Milatariga iyo kuwa booliiska dalka Kenya ayaa guud ahaan waxaa lagu soo badalayay ciidamo kale oo cusub oo sii wada howlgalka balse dhanka maleeshiyaadka Al Shabaab ayaa waxaa la xaqiijiyay in ay dhafar yihiin oo ay sidooda weli u soo jeedaan.
Qaar ka mid ah Saxaafada dalka Kenya ayaa sheegtay in maleeshiyaad-kaan aysan macquul eheen inay soo jeedaan waqti sidaas u fara badan balse ay yihiin kuwo marqaansan oo Qaad watay ama cunaya.
Dowlada Uganda Oo Adkeysay Ammaanka Xadka Ay La Wadaagto Kenya
Dowlada Uganda ayaa adkeysay ammaanka xuduuda ay la wadaagto dalka Kenya iyadoo maalintii Sadexaad ay kooxo argagixiso ah ku jiraan xarun ganacsi oo ku taala Nairobi.
Ciidamada booliiska Uganda ayaa galay geejignaan adag oo sare loogu qaadayo la socodka ammaanka dalkooda iyadoo wali dalka deriska la ah ee Kenya uu ka socdo howlgalka lagula dagaalamayo kooxo argagixiso Shabaab ah oo galay suuqa Westgate ee magaalada Nairobi.
Afhayeen u hadlay booliiska Uganda ayaa sheegay iney taxadar dheeraad ah siinayaan u kuurgalka xaalada ka taagaan magaalada Nairobi oo maalintii Sadexaad ay ka socoto howlgallo lagu soo afjarayo afgagixisada gashay suuqa Westgate.
Dhaqdhaqaaqyada ciidamada Booliiska Uganda ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen dadka isaga talaaba xuduuda Uganda iyo Kenya ee aan heysan Baasaboorka dalalka Africada bari